Tanzania oo Haweeney loo dhaariyay in ay ka noqoto Madaxweyne. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Tanzania oo Haweeney loo dhaariyay in ay ka noqoto Madaxweyne.
Tanzania oo Haweeney loo dhaariyay in ay ka noqoto Madaxweyne.
Samia Suluhu Hassan waa Madaxweynihii 6-aad ee loo dhaariyo hoggaaminta Tanzania, sidoo kale waa Haweeneydii ugu horreysay oo xilkaas ka qabata Dalkaan dhaca Qaaradda Afrika kadib markii uu geeriyooday Madaxweyne John Magufuli
10:15 AM xiliga dalkeeda maanta oo Jimco ah waxaa lagu dhaariyay Magaalada Caasimadda u ah Tanzania ee Dar es Salaam, waxaana ay sidaas ku noqotay Madaxweynaha rasmiga ah ee Tanzania.
Samia Suluhu waxa ay kasoo jeedaa Saldanadda Zanzibar, waxaana ay dhalatay 27-kii Janaayo 1960-kii, waxbarashada Dugsiga sare waxa ay dhammeysay sanadkii 1977 sida ku qoran diiwaanka sooyaalkeeda.
Waxa ay soo qabatay xilal kala duwan, shahaadooyin kala duwan ayay ka heysataa Jaamacado ay wax ku baratay muddada ay ku howlaneed waxbarashada, waxaana kamid ah: Maamulka & Maareynta oo ay ka daraaseysay Jaamacadda Mzumbe University.
Samia waxa ay lasoo shaqeeyay Hay’adda Cunnada adduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WFP, Jaamacadda Manchester ee Dalka UK ayay ka qaadatay Diploma Dhaqaalaha ah sanadkii 1994-tii.
Siyaasadda waxa ay si rasmi ah uga soo muuqatay sanadkii 2000 waxa ay wakiil ka ahayd Aqalka Zanzibar, ilaa ay kamid noqotay Golaha Wasiirada waa ay sii horumarineysay ka muuqashada Siyaasadda oo hami badan ay u heysay.
Bogaadin ayay ka heleysa Samia Suluhu Hassan madax u badan kuwa Qaaradda Afrika oo ku dhiiragelinaya in ay hoggaamiye ka noqota dalka murugada Madaxweynahooda geeriyooday la tiiraanyeesan.
Maqaal horeWasiirka Maaliyadda Mandheera oo u geeriyooday Covid-19.
Maqaal XigaFaah Faahino Kasoo Baxaya Weerar Ka Dhacay Hiiraan + Khasaaraha